Usoro Usoro Ọzụzụ Traktị Russia Crimea Amalitere | RayHaber
HomeỤWAEurope380 CrimeaLightsgbọ elu Crimea Russia na Crimea Amalite
12 / 11 / 2019 380 Crimea, 7 Russia, Asia, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ
Rọshịa kirie ọrụ ụgbọ oloko bidoro
Lightsgbọ oloko Russia Crimea bidoro; Site na owuwu nke Crimea, a na-ejikọ ala Russia na ala nke Crimea, Moscow na St.Petersburg, nke a na-atụ anya na ọ ga-amalite n'oge na-adịghị anya, tiketi ụgbọ oloko na-egosi gosipụtara mmasị dị ukwuu.
25 December otu ụzọ na-aga Sevastopol-St.Petersburg 4 bin 524 rere maka rubles, ụmụ amaala ndị asọmpi ịzụta tiketi maka otu ọnụahịa ahụ dị ka tiketi ụgbọ elu, ebe nrụọrụ weebụ Russian Railways dugara na mkpọchi ahụ.
Dabere na Moskovski Komsomolets, 3 rere karịa puku tiketi na ụbọchị mbụ mgbe mmalite nke ahịa.
Insgbọ oloko “Tavriya ecek ga-esi Moscow (Kazanski Station) na St. Petersburg (Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Moskovski) gaa Simferopol kwa ụbọchị. Oge njem ga-abụ awa 33 site na Moscow na 43 awa site na St. Petersburg.
Traingbọ okporo ígwè mbụ gafere n’elu Crimea ga-abụ n’ọnwa Disemba 23 n’etiti St.Petersburg na Sevastopol. Flightsgbọ elu Moscow-Simferopol ga-amalite na Disemba 24.
A na-enye tiketi maka Simferopol-Moscow na-ere 2 puku 966 rubles-9 puku 952 rubles, tiketi maka St.Petersburg-Sevastopol na-enye na ọnụ ahịa sitere na 3 puku 900-8 puku 900 rubles. (turkrus)
Ukraine Russia na-azụ njem iji kwụsị
Na-azụ ụgbọelu n'etiti Pristina na Ipek
Halkalı-Uzunköprü Train Flights malitere dị ka nke 1 May
Baghdad Fallujah na-azụ ụgbọ njem Malitegharịa ekwentị
Tragbọ Okporo Ọgba Dị Mkpa N'agbata Kiev na Boryspil Airport…
Erzincan-Erzurum na-azụ ụgbọ ala Re-Malite
Taa na History: 4 April 1900 Railway agreement na Russia
Mgbawa n'etiti obodo abụọ na-akwụsị na Russia! 10 Wounded 50 Wounded